ကိုယ်တိုင်ခရီးတစ်ခုစီစဉ်ခြင်း – YANGON STYLE
ကိုယ့်ဟာကိုယ်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အုပ်စုလိုက်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ခရီးတစ်ခုစီစဉ်ရာမှာအသုံးဝင်မယ့်ဟာလေးတွေပါ။ကိုယ်အသုံးပြုဖြစ်တဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်လေးတွေပေါ့နော်။သွားမယ့်ရက် ကြာမယ့်ခရီးတစ်ခုလုံးစာအတွက် စာရွက်နဲ့ Day1 Day2ဘာညာချရေးပီးစီစဉ်ပါ။ပိုသေချာပီးမမှားတော့ပါဘူး။
-ကားလက်မှတ်အတွက်အချိန်တွေစျေးနှုန်းတွေကြည့်ချင်ရင် www.mmbusticket.com မှာကိုယ်သွားမယ့်ရက်တွေဖြည့်ပီးကြည့်လို့ရပါတယ်။visa cardရှိရင်တော့တခါထဲဖြတ်လိုက်လို့ရပီး အဲမှာမဝယ်ချင်ရင်တော့ပုံမှန်လုပ်နေကျကားဂိတ်ကိုလှမ်းဖုံးဆက်bookလုပ် သွားမယ့်နေ့ကျမှပိုက်ဆံရှင်းအဲလိုလုပ်လို့ရပါတယ်။-လေယာဉ်လက်မှတ်ဆိုရင်တော့ www.skyscanner.net မှာဝင်မွှေပါတယ်။အချိန်တွေစျေးနှုန်းတွေကျလာရင်အဲထဲက trip.comမှာပဲဝယ်ပါတယ်။ဥပမာ-Air Asia websiteထဲမှာဝယ်ရင် visa cardနဲ့ရှင်းရင်$6လောက်ဖြတ်ပါတယ်။Trip.comမှာမပေးရပါဘူး။
-ပြည်တွင်းအတွက်ဆိုရင်ဖုန်းဆက်ပီးသာbookပါ။Appတွေထဲကbookရင်စျေးများပါတယ်။-ပြည်ပဆိုရင်တော့ booking.com နဲ့ Agoda နှစ်ခုလုံးသုံးပီးစျေးယှဉ်ကြည့်ပါ။တစ်ခုထဲပုံမှန်မသုံးပါနဲ့။တခါတလေ Agoda မှာပိုသက်သာနေတဲ့အခါမျိုးလည်းရှိပါတယ်။Agoda:final price ကိုတခါထဲမပြပါ၊ taxတွေထည့်ပေါင်းပါသေးတယ်။visa cardရှိမှအဆင်ပြေပါတယ်booking.com::final priceတန်းပြပါတယ်။hotelရောက်မှငွေရှင်းလို့ရပါတယ်။
ပြည်တွင်းသွားရင်ဘယ်သူ့ဆီငှားရမှန်းမသိရင် ဟိုတယ်ကိုပဲငှားခိုင်းပါ။အခုနောက်ပိုင်း fb ပေါ်မှာ……. car rental ဘာညာကွိကွရိုက်ထည့်လိုက်ရင်တသီကြီးကျလာပါတယ်။ပြည်ပသွားရင် Grabသုံးပါ။ဆိုင်ကယ်ငှားချင်ရင် တည်းတဲ့နေရာ သို့မဟုတ် နီးစပ်ရာ tourတွေမှာမေးပါ သူတို့ဆီမငှားရင်တောင် ညွှန်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ပြည်တွင်းအတွက်ဆိုရင် travel bloggerတွေရေးထားတဲ့စာတွေပဲအားကိုးရမှာပါ။နောက်တစ်နည်းက fbပေါ် keywordsနဲ့ရှာပါ။ဥပမာ-ကလောလို့ရိုက်ထည့်လိုက်ရင် bloggerမဟုတ်တဲ့သူတွေရေးထားတဲ့reviewတွေပါကျလာလိမ့်မယ်။အစုံဖတ်လို့ရတာပေါ့။ပြည်ပဆိုရင် စစချင်းအကြမ်းဖျင်းသိအောင်fbပေါ်ပဲအရင်ရှာပါ။နောက် googleခေါက်ပါ။ဥပမာ-How to go……to……. တို့ things to do in……တို့ပေါ့ သိချင်သမျှဟာရိုက်ထည့်ရှာပါ။websiteပေါင်းတစ်သောင်းခြောက်ထောင်ကျလာလိမ့်မယ် ကိုယ်နှစ်သက်ရာဝင်ဖတ်လို့ရပါတယ်။
ပြည်တွင်းဆိုရင်တော့မြေပုံကသိပ်တော့မလိုဘူး။ပါးစပ်ပဲသုံးပါ ညွှန်ပေးတဲ့လူတွေချည်းပဲ။ပြည်ပဆိုရင်တော့မြေပုံကမသုံးလို့မရတော့ maps.me Appသုံးပါ။google mapထက်ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။offline mapပါ download လုပ်ထားရုံပါပဲ။nearby မှာရှိတဲ့စားသောက်ဆိုင် ဘာညာပါ အကုန်ရှိပါတယ်။visa card​ ပြည်ပသွားမယ်ဆိုရင် visa cardဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ဟိုရောက်မှ exchange လုပ်တာထက် ATMစက်ကvisa cardနဲ့ထုတ်တာပိုပီးစျေးနှုန်းစိတ်ချရပါတယ်။ထုတ်ခကတခါထုတ်5000ဝန်းကျင်ပဲပေးရပါတယ်။အားလုံးပဲကိုယ်တိုင်စီစဉ်တဲ့ခရီးတွေအများကြီးသွားနိုင်ပါစေ